GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese (Yunnanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Indonesian Sign Language Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Marathi Myanmar Nepali Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
AJỤJỤ ỌNỤ | YAN-DER HSUUW
YAN-DER HSUUW bụ prọfesọ na mahadum dị́ na Taịwan. Ọ bụ onyeisi nke ngalaba na-achọpụta ihe gbasara nwa e bu n’afọ. O kwebughị na Chineke. Ma, ihe ndị ọ chọpụtara mgbe ọ na-arụ ọrụ mere ka o kweta. Ọ kọọrọ ndị bipụtara akwụkwọ a otú o si mee.
A mụrụ m n’afọ 1966. M toro na Taịwan. Okpukpe papa m na mama m na-ekpe yiri nke ndị Tao na nke ndị Buda. Anyị na-efe ndị nna nna anyị hà nwụrụ anwụ, na-ekpegakwara ihe ndị a kpụrụ akpụ ekpere. Ma, anyị ekwetaghị na ọ bụ Chineke kere ihe niile.
Gịnị mere i ji mụọ gbasara ihe ndị dị ndụ n’ụlọ akwụkwọ?
Mgbe m dị obere, ana m elekọtakarị ụmụ anụmanụ. Ọ bụ ya mere m ji chọọ ịmụtakwu otú m ga-esi na-enyere ma ụmụ anụmanụ ma ụmụ mmadụ aka ma ha daa ọrịa. Ebu m ụzọ mụọ otú e si agwọ ụmụ anụmanụ ọrịa, mechazie mụọ gbasara ụmụ e bu n’afọ, bụ́ nke m chere ga-eme ka m ghọtakwuo otú ndụ si malite.
Gịnị mere na i kweghị na Chineke na mbụ?
Na mahadum, ndị prọfesọ na-akụziri anyị na mmadụ si n’enwe pụta, mụ ekwetanụ.
Olee ihe mere i ji malite ịgụ Baịbụl?
Ọ bụ n’ihi ihe abụọ. Nke mbụ bụ na m nọ na-eche na a ga-enwerịrị chi kacha chi niile n’ime chi dị iche iche ndị mmadụ na-efe. Mana amaghị m chi nke ọ bụ. Nke abụọ abụrụ na m ma na ndị mmadụ ejighị Baịbụl egwu egwu. N’ihi ya, amalitere m ịmụ ya.
Mgbe m malitere ịmụ Baịbụl na mahadum ndị Katọlik dị́ na Beljọm n’afọ 1992, agara m n’otu ụlọ ụka ndị Katọlik rịọ ụkọchukwu nọ ebe ahụ ka o nyere m aka ịmara ihe dị́ na Baịbụl, ya ajụ.
Oleezi otú i si nweta ihe ị nọ na-achọ?
Mgbe afọ abụọ gachara, o nwere Onyeàmà Jehova sí Poland aha ya bụ Ruth kpọtụụrụ m mgbe ahụ m nọ Beljọm. Ihe o kwo gaa mụọ asụsụ Chaịniiz bụ ka ya na ndị Chaịna na-agụ akwụkwọ na mahadum nwee ike ịmụwa Baịbụl. Obi tọrọ m ezigbo ụtọ mgbe m hụrụ Ruth n’ihi na ọ dịla anya m chọwara ụdị enyemaka a.
O gosiri m otú ihe ndị sayensị chọpụtara si daba n’ihe Baịbụl kwuru n’agbanyeghị na Baịbụl abụghị akwụkwọ sayensị. Dị ka ihe atụ, Devid, bụ́ onye so dee Baịbụl gwara Chineke, sị: “Anya gị hụrụ m ọbụna mgbe m bụ nwa e bu n’afọ, e dekwara akụkụ ahụ́ m niile n’akwụkwọ gị, bụ́ ụbọchị a kpụrụ ha, mgbe a na-enwebeghị ọbụna otu n’ime ha.” (Abụ Ọma 139:16) Devid bụrụ ihe a o kwuru ka abụ, ma, ihe o kwuru bụ eziokwu. A hazichaala ihe niile gbasara otú akụkụ ahụ́ niile dị́ n’ahụ́ mmadụ ga-esi na-arụ ọrụ tupu nke ọ bụla apụta. Otú ihe ndị dị́ na Baịbụl si bụrụ eziokwu mere ka m kweta na ọ bụ Okwu Chineke. M bịakwara ghọta na e nwere naanị otu ezi Chineke aha ya bụ Jehova. 1
Gịnị mere ka i kweta na ọ bụ Chineke kere ihe niile?
Isi ihe mere e ji eme nchọnchọ bụ ka a chọpụta nke bụ́ eziokwu, ọ bụghị ka a kwado ihe ndị mmadụ chepụtara. Ọ bụ ihe ndị m chọpụtara mgbe m na-amụ gbasara nwa e bu n’afọ mere ka m kweta na e nwerịrị onye kere ihe niile. Iji maa atụ, ndị njinia chọwa ịrụpụta ụgbọala, ha na-arụ akụkụ ahụ́ ya dị́ iche iche otú a ga-enwe ike ijikọta ha ka ha ghọọ ụgbọala. Ma, otú akụkụ ahụ́ dị́ iche iche na-esi ejikọta onwe ha n’akpa nwa ma ghọọ mmadụ karịdịrị otú e si ejikọta ahụ́ ụgbọala.
Ọ̀ bụ eziokwu na ọ bụ otu mkpụrụ ndụ na-eji nwayọọ nwayọọ aghọ nwa?
Ee. A naghị ahụ mkpụrụ ndụ ahụ anya. Ma, ọ na-ekewa, mepụtawa mkpụrụ ndụ ndị ọhụrụ, na-amụbakwa n’ike n’ike. Ha nwere ike ịmụba okpukpu abụọ n’ime awa iri na abụọ ma ọ bụ n’ime awa iri abụọ na anọ. Ọ bụ mgbe ahụ mkpụrụ ndụ ndị ahụ na-amụba ka ha na-emepụta mkpụrụ ndụ ndị nke ga-amalite ịghọ nwa. 2 Mkpụrụ ndụ ndị ahụ ha mepụtara na-emepụtazi ihe ga-eru narị mkpụrụ ndụ abụọ ga-aghọ ihe dị iche iche na-adị n’ahụ́ mmadụ, dị ka ọbara, ọkpụkpụ, akwara, na ihe ndị ọzọ.
Ihe ndị m chọpụtara mgbe m na-amụ gbasara nwa e bu n’afọ mere ka m kweta na e nwerịrị onye kere ihe niile
Mkpụrụ ndụ nke ọ bụla ga-adịrịrị otú o kwesịrị ịdị, dịrịkwa ebe o kwesịrị ịdị. Ha ga-ebu ụzọ jikọọ onwe ha ghọọ uru ahụ́, ha mechaa, ha aghọọ akụkụ ahụ́ dị iche iche. O nwebeghị njinia chere echiche ịrụpụta ihe ga na-akpa ụdị ike a mkpụrụ ndụ na-akpa. Ihe niile gbasara otú mkpụrụ ndụ ga-esi aghọ nwa dị n’ime ihe a na-akpọ DNA. Mgbe m chebaara ihe a niile echiche, ọ bịara doo m anya na ọ bụ Chineke kere ihe niile.
Gịnị mere i ji ghọọ Onyeàmà Jehova?
N’ikwu ya ná nkenke, ọ bụ ịhụnanya. Jizọs Kraịst kwuru, sị: “Mmadụ niile ga-eji nke a mara na unu bụ ndị na-eso ụzọ m, ma ọ bụrụ na unu enwee ịhụnanya n’etiti onwe unu.” (Jọn 13:35) Ndị hụrụ mmadụ ibe ha n’anya anaghị akpa ókè. Ha anaghịkwa ahọ obodo mmadụ si, omenala onye ahụ, ma ọ bụ otú onye ahụ na-acha. Achọpụtara m na Ndịàmà Jehova hụrụ ibe ha n’anya otú ahụ Jizọs kwuru. Ha mekwara ihe gosiri m na ha hụrụ m n’anya mgbe m bidoro iso ha.
^ 1. Abụ Ọma 83:18; 1 Ndị Kọrịnt 8:5, 6.
^ 2. N’ihi ihe Prọfesọ Yan-Der Hsuuw mụtara na Baịbụl, ọ naghị eji mkpụrụ ndụ ndị e si n’akpa nwa nweta eme nchọnchọ.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Otu Ọkachamara Kwuru Ihe Mere O Ji Kwere na Chineke
AJỤJỤ ỌNỤ Otu Ọkachamara Kwuru Ihe Mere O Ji Kwere na Chineke
IHE BAỊBỤL KWURU Nchegbu
IHE NDỊ NA-EME N’ỤWA Akụkọ Gbasara Mmekọrịta Mmadụ na Ibe Ya
Ụdị Dị Iche Iche Họrọ ụdị nke ị ga-ewere TETA! Baịbụl Ọ̀ Pụrụ Iche n’Eziokwu?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ TETA! Baịbụl Ọ̀ Pụrụ Iche n’Eziokwu?
TETA! Baịbụl Ọ̀ Pụrụ Iche n’Eziokwu?